Maqaal: Saalasaaloo waallee saakaanan sidaas kaaga hadhin - Latest News Updates
Maqaal: Saalasaaloo waallee saakaanan sidaas kaaga hadhin
Berigii uu halganka gobannimo-doon Xaaji Faarax Oomaar u faydnaa ee Ingiriisku u taag waayey ayaa waxa uu gumeysigu lacag siiyey qaar caado-qaatayaal ah oo Xaajiga meelahaas ka aflagaaddeeya.
Markii aflagaaddo iyo cayi waxba tari waayeen, ayuu u diray nin ka mid ah kooxdaas macaan-jecesha ah oo ku yidhi “suuqa Xaaji Faarax Oomaar ku soo halgaad”.
Indho ribix arkayaa rixim ma arkaane, sidii buu yeelayoo waxa uu dhirbaaxay Xaaji Faarax oo suuqa iska jooga.
Suldaan Rooble nin la odhan jirey ayaa warkii loo sheegay. Bakoorad maaci ah oo raasba raas ah ayuu soo qaatay oo yidhi “ninkaas Xaajiga gacanta u quudhay i tusa”.
Waa loo tilmaamay. Bakoraddii buu daba u qabtay oo la dhacay. Xaaji Faarax baa arkay ninkii oo uu suldaan Rooble gawdaa ku hayo.
Meel durugsan ayuu Xaaji Faarax ka soo qayliyey, isaga oo ku dhawaaqaya “Suldaan Rooblow ka daa, Rooblow ka daa”
Suldaan Rooble ayaa yaabay oo yidhi “waayo Xaaji, miyaanu ahayn ninkii ku dhirbaaxay?”
Xaaji Faarax Oomaar ayaa yidhi “Suldaan Rooblow isaga ma aha ninka i dhirbaaxay ee waa ninka cad ee ka daa”. Ingiriiskaa i dhirbaaxay ee miskiinkani isagaa dulmanoo loo doodayee iska daa bay ujeeddada Xaajigu ahayd.
Sheekaba sheeko ayay keentaaye, wax la yidhi maalin dhowaydna “nin baa Hargeysa xawaaladda lacag ka soo qaatay. Niman tuug ah oo dibedda joogey ayaa arkay markuu lacagta oo boqshad ku jirta uu jeebka dambe gelinayey.
Faras-magaalaha isaga oo maraya ayay isu jebiyeen oo tuugtii kala baxeen lacagtii boqshadda ku jirtey. Waa ay yaaceen. Wuu ka daba qayliyey isaga oo ku dhawaaqaya ‘waar tuugta qabtaay’, dadkii baa daba yaacay. Inta labadii tuug is taageen oo dadkii ka horyimaaddeen ayay ku yidhaahdeen ‘waar ma waxaad la socotaan nasakhan gaboobey ee Soomaaliweynta ah?!’
Dadkii baa ninkii dulmiga iyo tuugadana ka hadlayey kula jeestay oo ku boobay. Hadaa xaqullaah xaqu daayin Allaa iyo gacan nebi nin doonow gacantaa ha samaato.
Funfunnaaga i caayey
Ismaaciil Futo sheeg iyo
Ma facaysto Cabbaas
Filkay baanay ahaynoo
Faa’iidaan iiga kordheyne
Fulihii Cali Dhuuxee
Hadba qoon faqinaayee
Fagaaraa imanayn baa
Sida fooraha roobkoo
Farax meel leh ku hooroo
Fidhadii ka danbeysey
Fadaaddaysay dhulkii baan
U fuuqfuuqsan lahaayoon
Fidhfidhkii la arkeen.
Intaas baa maantana naf laga deyayaa! Alle idin qabey, illayn adhi quluxqulux kama ilbaxo. Runta ku qariyey is leeyihiin, saw ma aha.
Biidhiqaatayaasha nabarkaygu wuu dhaafsan yahay. “Saalasaaloo waallee saakaanan sidaas kaaga hadhin”.